TTSweet: ကုလားဗယာကြော် ...
Posted by T T Sweet at 4:46 PM
Labels: (၁ ၀၀) မြန်မာ အစားအသောက်များ ***, (၁- ၈) ဗယာကြော်
မြူးမြူး October 20, 2010 at 5:57 PM
ဗယာကြော်နဲ့ရေနွေးကြမ်း ကောင်းမှကောင်းပဲ.. ပဲကိုကြိတ်ရင် ညက်အောင်ကြိတ်ရတာလာ မညက်တညက်လေးလားဟင်..
ဧပရယ်လ်ပူး@ပူးတေ October 20, 2010 at 6:04 PM
စားချင်ချာလေး ကြိုက်တယ် တီတီဆွိ... သုတ်စားလိုက်ရရင် ရှယ်ပဲနေမှာ...
T T Sweet October 20, 2010 at 6:13 PM
မြူးမြူးရေ ... ညက်နေအောင်ကြိတ်တာ ပိုကောင်းပါတယ်။
ပူးပူးရေ ... သံပုရာရည်လေးဆမ်းပြီးသုတ် အဟုတ် ကောင်းတယ်။
စန္ဒကူး October 20, 2010 at 6:55 PM
စားပီဟေ့... ရှေ့မှာ (၄) ယောက်ဘဲဆိုတော့နဲနဲကျန်အုံးမှာပါ။။းး)))တီဆွိ..အရမ်းလုပ်တ်တာဘဲ.. ကူးဆိုရယ်ဒီမိတ်နဲ့ကြော်တာတောင် ပုံမမှန်ဘူး.. ဟိ
PhyoPhyo October 20, 2010 at 9:49 PM
စားချင်စရာလေး .. တော်လိုက်တာ
သက်ဝေ October 21, 2010 at 12:48 AM
ဟွန့်... တို့ကတော့ မွှေး ဘယာကြော်မှုန့်ထဲ ကြက်သွန် ငြုတ်သီးစိမ်းနဲ့ ပျဉ်းတော်သိမ် အရွက်တွေထည့်ပြီး ကြော်လိုက်တာပါပဲ... သိပ်အကြိုက်ကြီးမဟုတ်လို့ ဒီနေ့တော့ အေးအေးဆေးဆေး ဖတ်သွားတယ်... သိပ်ရုပ်မပျက်ဖူးလို့ ဆိုရမယ်...း))
မသက်ဝေလိုပဲ ကုလားဗယာကြော် သိပ်မကြိုက်.။
မမဆွိရေ ဟိုတစ်နေ့ကပဲကြော်စားတာ အစဉ်မပြေလို့ မဆွိကိုကျူးပစ်ထဲမှာ မေးမယ်လို့စဉ်းစားထားတာ အခုတော့အတော်ပဲ။ နောက်ထပ်မကြေပွဲနွှဲအုန်းမယ်။ ကျေးဇူးပါနော်။
Moe Cho Thinn October 21, 2010 at 9:30 AM
ဗယာကြော်ကို ကြိုက်ပါတယ်။ လှည်းတန်းမီးပွိုင့်နားမှာ ရောင်းတဲ့ ဗယာကြော် အလုံးသေးသေးလေးတွေလုပ်ပြီး ကန်တော့လေးနဲ့ ရောင်းတဲ့ဆိုင်ဆို စားရတာ အမြဲပဲ မ၀ဘူး။ မဆွိဆီလာမှ အ၀စားတော့မယ် (၀င်္က၀တ္ထိ နဲ့ ဒဲ့ ပစ်လိုက်သည်)
Moe Cho Thinn October 21, 2010 at 9:32 AM
၀င်္က၀ုတ္ထိကို ရေးတာ တချောင်းငင် ကျန်သွားတယ်ဗျို့..
ငါ့နှယ် အလျင်စလို ငတ်တာ လူသိကုန်ပြီ။ မသက်ဝေလို့ ဟန် မကောင်းပါလားး (ကိုယ့်နဖူးကိုယ်ရိုက် အပြစ်တင်သွားသည်)
မဆွိရေ...ဗမာဗယာကြော်လုပ်ရင် တင်ပေးပါဦး...အလယ်က အပေါက်လေးနဲ့အကွင်းကိုပြောတာနော်...မတ်ပဲကြော်လို့လည်းခေါ်သလားမသိ...
Sunny October 29, 2010 at 5:19 AM
တီဆွိ .. ဗယာကြော်လာစားသွားတယ်.. :)
Anonymous December 3, 2012 at 6:45 AM
ဒီနေ. တီဆွိ နည်းလေးနဲ. ဗယာကြော်ပြီး ဆွမ်းကပ်တယ်.
တီဆွိ ဟင်းချက်နည်းတွေ များများတင်နိုင်ပါစေ။ :))